i-Currie Cup Archives - Impempe
Category: i-Currie Cup
Iziholwa uButhelezi iShark kwiCurrie Cup
June 17, 2021 Impempe.com
UDABA: Sihle Ndlovu ISITHOMBE: Facebook ICell C Sharks seyimemezele ukuthi izobe iholwa uPhephsi Buthelezi njengokaputeni kule sizini yeCurrie Cup ka-2021 eqala ngoMgqibelo. Abadlali abaningi beSharks baseqenjini lesizwe amaBhokobhoko njengoba lilungiselela ukubhekana neBritish and Irish Lions […]
Leave a commenti-Currie Cup, Ibhola lombhoxo
Uchazwa eyokudlala nezingwazi kwiSharks uSiya Kolisi
February 17, 2021 Impempe.com
MTHOKOZISI MNCUSENI Akuzange kudingeke ukuthi iCell C Sharks isebenzise amagama acwengekile ukushela uSiya Kolisi naye okumcacele zisuka ngakho kodwa ukuthi uzoqoma kuleli qembu lakwelikaBhanana. Kuzwakala sengathi zihambe kanje izingxoxo phakathi kukakaputeni wamaBhokobhoko omenyezelwe ngokusemthethweni yileli […]
Leave a commentAmaBhokoBhoko, i-Currie Cup, Ibhola lombhoxo
MTHOKOZISI MNCUSENI Uyohlale njalo amukelekile kubantu baseKapa nakukona konke okuthinta umbhoxo ngaphansi kweWestern Province Rugby Union ukaputeni wamaBhokobhoko uSiya Kolisi obhale incwadi okusobala ukuthi uyisonge esemanzi yizinyembezi. UKolisi ubhale le ncwadi kulandela ukugqabuka kwefindo lomshado […]
Useshiye phansi eKapa waqoma KwaZulu uKolisi
MTHOKOZISI MNCUSENI Konke sekumi ngomumo ukuthi iCell C Sharks iwubambe ufishi omkhulu ongukaputeni wamaBhokobhoko uSiya Kolisi osehlukanise konke obekumhlanganise neWestern Province. Kusukela unyaka uqala bezivele ziwunuka ukuthi uKolisi uzofulathela iKapa abhekise amabombo eThekwini njengoba leli […]
Usethi khumu ekudlaleni uJP osezothatha esokuqeqesha kwiSharks
MTHOKOZISI MNCUSENI Sesiwabeke ethala amakhokho ngemuva kweminyaka engu-16 isilomo somdlali wamaBhokobhoko neCell C Sharks, u-JP Pietersen. Nokho ngeke alahleke embhoxweni kwazise umemezele ukuthi uzothatha isikhundla sokuqeqesha kuyona iSharks kodwa ezinkulisa zakhona. Lesi siphekepheke esineminyaka engu-34 […]